FAQ - emdesignhouse
Domain ကို တခြား Company မှာဝယ်ပြီး Hosting ကို EMDESIGNHOUSE မှာဝယ်လို့ရမလား
ရပါတယ်။ EMDESIGNHOUSE မှ hosting ၀ယ်ပြီးလျှင် သင့် Domain ၏ NameServer ကို EMDESIGNHOUSE ၏ NameServer သို့ Point လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် DNS Zone File တွင် A record ကို EMDESIGNHOUSE ၏ သင့် Hosting ရှိသော Server သို့ Point လုပ်ပေးရပါမယ်။ * ထို Process များနှင့် ရင်းနှီးမှုမရှိပါက EMDESIGNHOUSE မှ အစအဆုံးပြုလုပ်ပေးပါမည်။
Hosting ကို တခြား company မှာဝယ်ပြီး Domain ကို EMDESIGNHOUSE မှာဝယ်လို့ရမလား
ရပါတယ်။ EMDESIGNHOUSE မှ သင်၏ Domain ကို သင့် hosting ၏ Nameserver သို့ point လုပ်ပေးရပါမည်။
Domain ကို EMDESIGNHOUSE မှာဝယ်ပြီး Hosting မ၀ယ်ရင် (သို့) Hosting မရှိရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
Domain ကို EMDESIGNHOUSE မှာဝယ်ပြီး သင့်တွင် Hosting မရှိလျှင် သင်၏ Domain အား Parked-Domain အနေဖြင့်သာ မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ Ning / Blogspot / Google Apps စသည်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် Domain ဝယ်ယူသည်ဆိုပါက Domain Control Panel တွင် DNS Zone record (A, CNAME, etc...) အားထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
Hosting ဝယ်ပြီးရင် account activate ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ
emdesignhouse.com မှာ Credit/Debit Card နဲ့ Online ၀ယ်ထားတယ်ဆိုရင် Transaction Successful ဖြစ်တာနဲ့ ၄ နာရီအတွင်းမှာ Hosting Account Setup E-mail ရပါမယ်။
EMDESIGNHOUSE ရဲ့ Hosting မှာ PHP CMS တွေဖြစ်တဲ့ Joomla, Drupal, WordPress စသည်တို့ကို သုံးလို့ရပါသလား
EMDESIGNHOUSE ရဲ့Hosting က Industry Standard ဖြစ်တဲ့ LAMP (Linux, Apache, MySQL & PHP) ကို အပြည့်အ၀ Support လုပ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် Linux, PHP Platform ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော CMS များဖြစ်ကြသည့် Joomla, Drupal, WordPress, PHP အစရှိသော မည်သည့် CMS မဆို Install လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
EMDESIGNHOUSE ရဲ့ Hosting မှာ Backup ရှိသလား
Hosting Package များဖြစ်ကြတဲ့ S-Starter, S-Standard များမှာ Daily Backup နှင့် Weekly Remote Backup ရှိပါတယ်။ Daily Backup ကို Hosting Account တည်ရှိရာ Server ပေါ်မှာပဲ Backup လုပ်တာဖြစ်ပြီး Monthly Remote Backup ကို UK ရှိ Server များတွင် သိမ်းဆည်းပါတယ်။
တခြား Company ကလုပ်ထားတဲ့ ရှိပြီးသား Website ကို EMDESIGNHOUSE မှ Update လုပ်ပေးမလား ? ပြင်ဆင်မွမ်းမံပေးမလား ?
လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှိပြီးသား Site က Technology လည်း ဟောင်းနေပြီ။ Design တွေလည်း out နေပြီ၊ တော်တော်များပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ EMDESIGNHOUSE မှာ Site အသစ်လုပ်တာ ပိုသင့်တော်မှာပါ။
Copyright © emdesignhouse.com 2022